Ụbọchị My Pet » Ịhụnanya- 7 Easy Nzọụkwụ
Ụra na ịhụnanya bụ otu n'ime ndị kasị kpokọtara obi n'ụwa. Jupụtara dị ọcha bliss na afọ ojuju, ịbụ na ịhụnanya na-ezi onye na-eme ka ị na-eche dị ka ma ọ bụrụ na i nwere ike imeri ihe ọ bụla. Mgbe anyị n'anya n'ezie a onye, enwe ma ọṅụ na iru újú bụ ezigbo ihe àmà nke ezi obi na nso nke mmekọrịta. Ezie na ịhụnanya bụ mgbagwoju anya, n'okpuru anyị depụtara ihe ịhụnanya bụ na otú e nweta na-adịgide adịgide ịhụnanya 7 mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ #1: Onye
Mkpụrụ obi gị na onye òtù ọlụlụ na-eche ka a hụrụ. Ọtụtụ mgbe, ị maara ozugbo mgbe ị izute gị ọzọ na ọkara, n'ihi na gị mkpụrụ obi abụọ jikọọ na ị ga-enwe dị ka ọ bụrụ na ị mara ha ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe ị chọpụtara na nke a, ọ dị mkpa ka uche na na positives. Achọ flaws na onye gị na ga na-eduga obi mgbawa. Mụta ịmakụ akụkụ nile nke onye gị na nloghachi, ị ga-enweta ndụ ebighị iguzosi ike n'ihe na ịhụnanya.
Nzọụkwụ #2: Njinji ka onye gị na mkpa
Na nke ọ bụla mmekọrịta ọ dị mkpa na gị na ndị na-akpa echiche ziri ezi na ibe gị. Ọtụtụ n'ime oge ị ga-abụ na otu peeji nke ma e ga-abụ ụfọdụ ndapụta na mgbe gị mkpa dị iche iche. Ọ dị mkpa itinye onwe gị na onye gị na akpụkpọ ụkwụ iji jide n'aka na ihe niile nke ha na-akpa anyị.
Nzọụkwụ #3: Na-ege ntị onye gị na
Ige ntị onye ị hụrụ n'anya bụ ụzọ kasị mma ịmụta ndị ha bụ na mgbakwunye na otú izute ha mkpa ha. Ọ ga-enyere gị aka ka obi jikọọ onye gị na, ịghọta ebe ha bụ ndị na onye siiri, na-akwado ha n'oge mkpa, na-achọpụta na ụzọ dị iche iche aka na-eme ka ha ọchị. Dị ka mmadụ, anyị na-na-na-amụta na-eto eto nke bụ ihe mere na-ege ntị dị mkpa ka edebe ịhụnanya gị ike.
Nzọụkwụ #4: Ghọta na onye gị na
Obi ekele niile ihe ọma banyere onye gị na ihe ndị dị mma na ha ga-enyere gị sikwuo ike nkekọ. Ilekwasị anya ọma na-eme ka ọ dịrị ya mfe ka ndị ọzọ ihe na-aga, na-eleghara ndọpụ uche nke esemokwu, na-anabata ọrụ nke ndụ ruo ibe gị na-atụ anya.
Nzọụkwụ #5: Wepụta oge na onye gị na
Ịchụ oge na-emefu ọnụ dị oké mkpa na-eto eto dị ka di na nwunye. Site anọkọ ọnụ, ị ga-ịkọrọ gị echiche, mmetụta, na nsogbu. Na nke a na-akọrọ oge, gị nkekọ ga-emikwu emi-akpụ ha nwere ezigbo enyi na mgbakwunye na a mmekọrịta mmekọahụ. Isi ihe na-ebighị ịhụnanya bụ ịghọ ndị kasị mma nke enyi.
Nzọụkwụ #6: Meere onye gị
Ọ bụrụ na i cheta ihe mara mma, ekwu ya ka onye gị. Obiọma bụ a obere ma dị ike ihunanya e ji mara. Mgbe ọ na-ewe vulnerability na-enwe obiọma, meanness emecha eri efep ke a mmekorita mgbe ahụ obiọma na-azụlite.
Nzọụkwụ #7: Na-romance ndụ
A ihunanya njem ma ọ bụ ogbugbu bụghị naanị zuru okè na mberede ma ahụmahụ enyere aka na-ihe dị ndụ na omiiko. Inwe ihe ọhụrụ ọnụ ga-aka-ekpughe ọhụrụ na-akpali akpali ihe banyere onye ọ bụla ọzọ.
Ezie na-ada na ịhụnanya bụ na-akpali akpali, ọ dịkwa mkpa ịghọta na ahuhu na osisi ike abụghị otu dị ka mmekọrịta chiri anya. Ịhụnanya-achọ obi ike na-arụ ọrụ, na ọ bụ Nchikota ọtụtụ akụkụ dị iche iche na-eme ka ịhụnanya siri ike. Ma ozugbo ịhụnanya esịmde na siri ike larịị, ọ na-aghọ-adịghị ada ada nkwado site n'ahụhụ na mkpa, na ọ bụ a na njikọ na pụrụ n'ezie mgbe a ga-agbaji.
5 Mere nri ụtụtụ mbụ AFỌ bụ amamiihe